Kadıköy Ferry Boat inogadziriswa kubva kumusoro kuenda kumusoro | RayHaber | raillynews
mushaTURKEYDunhu reMarmara34 IstanbulKadıköy Ferry Boat inogadziriswa kubva kumusoro kuenda kumusoro
22 / 05 / 2020 34 Istanbul, GENERAL, HIGHWAY, musoro wenyaya, Dunhu reMarmara, TURKEY
Gokova chikepe chiteshi unovandudzwa
Kadıköy-2 (Nyowani) Ferry Port iri kuvandudzwa kubva kumusoro kusvika kuzasi. Vachitaura kuti ivo vanoda kushandisa ma piers senzvimbo yekugara uye yechiitiko, City mitsara AŞ General Manager Sinem Dedetaş akazivisa kuti vachatanga kuvandudza mabasa kune vamwe piers.
İBB Şehir Hatları AŞ, Kadıköy-2 Akatanga kugadziridza mabasa kuFerry Port. Kuitira kudzivirira kuti basa rekufambisa risakanganiswe, nguva yekumashure inoziviswa mukati memazuva uye husiku-hwehusiku mabasa, pier rese rinoiswa kubva pasi kuenda padenga.
"Nguruve dzakakosha semakungwa"
Vachipa pfungwa yekuti kuedza kuunza iyo pier nyowani kune vatasvi nekukurumidza sezvinobvira kwakaitwa nezvikwata zvine ruzivo, Şehir Hatları A.Ş. Sinem Dedetaş, General Manager, akati:
“Kunyange tichigadzira nyowani dzatinoshandira, hatiregei kuregera avo vanobaya. Ma piers edu akakosha seyakaoma. Hatingooni chete piers senzvimbo dzinopfuura nevanopfuura. Isu tinofunga nezvayo seakachena, akapamhama, nzvimbo dzakajeka umo vatinofamba navo vaviri vanofema uye vanonzwa zvakanaka pavanenge vachienda kumafuro avo uye vachimirira nguva dzechikepe. Tiri kuvandudzwa nenzira yekuti vaviri vapfuuri nevashandi vedu vari kushanda pamapira vagadzikane. "
Mamwe ma piers anozovandudzwa
Achitaura kuti mamwe madonhedza anovandudzwa, Dedetaş akati, "Mumazuva anotevera, kushandisa madhiri edu sehupenyu uye nzvimbo yechiitiko iri pakati pezvirongwa zvedu nezvinangwa zvedu. Isu takashandisawo vagadziri vemukati. "Ruoko rwemugadziri wemukati richakodzerawo kuti tiregedze."
Kuzorodza kubva mumusoro kusvika kumunwe
Kugara nhaka sedambudziko Kadıköy-Simiswa yakamiswa yeFerry Port iri kuderedzwa. Yese marara nemvura yakachena, masisitimendi emagetsi, magetsi ekucheresa, zvemukati -kunze magetsi, magetsi anotenderera, zvitoro zvematiketi, zviziviso zvemashoko zvevatakuri nemabhodhi, internet masimendi, makamera, mafoni ekubhadhara, maATM ebhangi, makosi ari kuvandudzwa. Pasi riri kucheneswa.
Kune rimwe divi, kuvandudzwa kweiyo ulstanbul Kitapçısı, iri pauriri hwepamusoro pey pier, naKültür A.Ş.
Marmaray, Inotakurwa mazana mashanu ezviuru Vanhu pazuva, inocheneswa kubva kuMusoro kuenda kumunwe zuva nezuva
IMM inoronga chikepe chakazvimiririra che 8 Kurume International Women’s Day
Marmaray Project yeGebze Pass Bridge Pier yakagumburwa nevashandi ve1 Vakakuvadzwa
3. Iyo Viaduct Pier yeBridge yakarohwa (Photo Gallery - Video)
Bull Pier Yakasimbiswa
Ushumiri hwakapa Mudanya Pier kuBursa Metropolitan
kubva BURULAŞ Kabataş Tsananguro yaPier
BUDO Kabataş Pier akavhara
Tender Notice: Kuvakwa kweKaraköy City Lines Pier
Atabey Ferry Port yakaitwa nzvimbo yekumirira
Atabey Ferry Port iri kugadziriswa zvakare
Kuzadzikisa karaköy Pier itsva
Passport Pier 'Mheni' Kuputsika!
Shipu inotarirwa kuPasport kubva kuChitarine Pier
Gavhuna Bilmez: 'Hatina mukana wekuvaka zvakare Van Ferry Pier Park'
Kabataş zvikepe zvechikepe zvichange zvakavharwa kune mafambisa egungwa
Marmaray uye metrobus inotora 10 mhenderekedzo dzezvikepe
SEKA Pier Yakaparadzwa neClouding Crane
Kufambiswa kwechikepe kuna Marmaras
Chokutanga Trolleybus Tosun First Steamer
Lodos Zvinopinganidza Kutya muIzmir
Mordoğana mhenderekedzo yebheni yakatanga